Ny tena hevitry ny hoe: “Ny fianarana no lova tsara indrindra” – Blaogin'i Voniary
Ny fianarana dia tsy voatery any an-tsekoly ihany. Matetika isika mandiso ny hevitr’io ohabolan-drazantsika io ka manimba zavatra maro. Voafitaka ianao raha hanao tsinontsinona ny zavatra rehetra fa hifofotra mafy any am-pianarana.
Ny fiainana koa dia fianarana
Jereo i Jesoa. Izy moa no ohatra hitako akaiky indrindra sady izy no modely tsara alaina tahaka indridra amiko. Rehefa manao fanoharana izy dia izay hitany eo amin’ny fiainana andavanandro no resahiny hany ka azon’ny olona izay tiany ambara. Ohatra amin’izany ny lalivay mampitombo ny mofo, ny jiro atao eo ambony latabatra, ny siny tonta, ny divay vaovao sy ny sisa. Ny Ntaolo Malagasy koa dia nahay naka lesona avy amin’ny tontolo iainany. Hita soritra izany amin’ireny oha-pitenenana ireny toy ny hoe: “maika tsy faingana toy ny dian’ondry”, “mizo-poana toy ny omby hovonoina”, “manararaotra toy ny banga mihomehy alina”. Diniho àry ny zava-misy, misintona lesona amin’izay iainanao sy ny manodidina anao. Izany no fianarana.
Lova tsara indrindra
Jereo izay ataon’ny ray aman-dreninao, henoy ny zokiolona sy ny anti-panahy. Amin’izay dia handray lovatsara avy amin’ireo efa nahita fiainana sy manana traikefa ianao. Ireny manko no ela nipetrahana amoron’ala ka mahalala ny mahitsy ho kapaina, ela nipetrahana amoron’drano ka mahalala ny marivo hiroboana. Manaraka izany, mamakia boky tsara ary fantaro ny zavatra rehetra. Fahendrena maro, Malagasy na vahiny, no voarakitra ao anatin’ireny boky ireny. Dia hanana harena entinao miaina sy miatrika ny hoavy ianao. Harena tsy voafaritry ny mari-pahaizana, tsy voarakitra an-taratasy. Ny lova raisinao dia tsy voatery azo tsapain-tanana eo no ho eo. Harena sy lova feno anefa izany ho anao sady azonao ampitaina amin’ny zandry, zanaka ary ny fara aman-dimby.
Ny hendry ihany, hono , no anarina fa raha ny adala no tenenina, ny lambany no ariany. Koa entanina isika mba samy handray ny tandrify azy avy.
empowerment gasy, fianarana, kolontsaina, maha-malagasy, malagasy, ohabolana malagasy
Un commentaire sur “Ny tena hevitry ny hoe: “Ny fianarana no lova tsara indrindra””
Ping: Des fournitures scolaires pour 185 élèves de l’EPP le plus démunis